Pantone's Colour of the Year ho an'ny 2018: Ultraviolet | Famoronana an-tserasera
avy amin'ny Andriana amin'ny antoko politika toa an'i Podemos, ny loko volomparasy dia mpandray anjara amin'ny fomba samihafa amin'ny fahazoana ny karazana hevitra na ny endrika. Prince no nitondra azy toy ny faneva mba hahafahantsika mifamatotra akaiky amin'ity mpanakanto ity izay nanjary nalaza tamin'ny hira toa an'i Purple Rain mihitsy.
Izao dia rehefa Pantone, manam-pahefana amin'ity loko ity, ilay nanambara ny lokony ho an'ny taona 2018. Ity ilay PANTONE 18-3838 miafina, na izay azontsika fantarina ihany koa ho ultraviolet. Alokaloka volomparasy izay, eo am-bavan'i Pantone, dia manondro ny fahaizany mifandray amin'ny fomba am-boalohany, manan-tsaina ary mahita fahitana.
Ity loko nofidian'i Pantone ity tamin'ity taona ity dia mifanohitra amin'ilay maintso tena maitso, PANTONE 15-0343. Raha "Greenery" dia izay rehetra mifandraika amin'ny fikarohana kalitao sy ny firindrana amin'ny tontolo mikorontana, ny ultraviolet dia tonga hitondra antsika hanakaiky kokoa ny tsy fantatra na izay mbola ho fantatra.
Leatrice Eiseman tenany, talen'ny fahefana mpanatanteraka ao amin'ny Pantone Color Institute, no manazava izany miaina amin'ny tontolo mila eritreritra an-tsaina isika ary famoronana betsaka. Io karazana aingam-panahy noforonin'ny PANTONE 18-3838 loko ultraviolet io, volomparasy vita amin'ny manga izay mitondra ny fahatsiarovantsika sy ny fahafahantsika mankany amin'ny avo indrindra.
Izy tenany ihany no maneho ny dikan'io loko io manokatra ny lalana amin'ny fikarohana ireo teknolojia vaovao na dia ny fanehoana kanto sy ara-panahy lehibe indrindra aza. Loko mandinika sy saro-pantarina izay manolotra ny mistery amin'ny cosmos.
Ny Ultraviolet dia tsy ny volomparasy voalohany nivoaka tao Pantone tamin'ity taona ity, hatramin'ny volana aogositra tamin'ity taona lasa ity, ho fanomezam-boninahitra ny fahafatesan'ny Prince mpitendry zavamaneno, nanala ny volony volomparasy, izay nentanim-panahy avy amin'ny piano Yamaha volomparasy mpanakanto.
Manana fampahalalana bebe kokoa momba an'io loko io ianao avy eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Pantone dia manambara ny loko 2018 amin'ny taona: ultraviolet
Mpamokatra logo vaovao: tombony sy fatiantoka